Mod in MOV - Sida loo Beddelaan mod in QuickTime MOV on Mac / Windows
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan mod in QuickTime MOV ee Mac OS X Libaaxa / Windows
Sida aan ognahay, MOV waa qaab caan video isticmaalaya geynta riixo lahaansho iyo la jaan qaada labada dhufto ee Macintosh iyo Windows, gaar ahaan playable on iPhone, iPad iyo iPod u soori dhaqaaqo. Iyadoo mod waa qaab si aad ah loo isticmaalo si loo badbaadiyo macluumaadka warbaahinta on kaamirada iyo kaamirooyin iyo sidaas ma aha, oo caan ku Qalabka telefoonada gacanta sida qalabka macruufka iyo xitaa aan laga garan karaa qaar ka mid ah barnaamijyadooda Mac sida QuickTime. Sidaas darteed haddii aad qabto dhibaatooyin la this, aad u bedeli karaan mod in QuickTime MOV isbedel ah.
Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa mod in QuickTime MOV Mac ​​diinta iyo sidoo kale mod in QuickTime MOV Windows diinta ka taageerto inaad Radidiyaha aad cam video clips ku saabsan qalab ama inaad ku isticmaasho software Mac si habsami leh. In sidaa la yeelo, a video Converter xirfad caawin lahaa. Halkan Converter Video for Windows iyo Video Converter u Mac (Mountain Libaaxa, Libaaxa taageeray) waxaa ka shaqeeya in mod si ay beddelaad MOV. Halkan muujinaya faahfaahsan sida aad u badalo mod in QuickTime MOV ee Mac iyo haddii aad doonayaa inaan shaqo ee Windows sameeyo, waxaad tagi kartaa ka Guide User of Video Converter badan info.
Talaabada 1: shuban files mod in mod ay u MOV ( QuickTime Converter) Mac
Si toos ah jiidi & jeedi files Cam mod in app ee Mac, ama madaxa si "File" ka dibna dooran "Media Load Files" xitaa your computer iyo dooran mod ku soo gudbin aad rabto in aad si loogu badalo. Waxaad ku shuban kartaa dhowr files mod isku mar la shaqo ee diinta Dufcaddii.
Talaabada 2: Calan qaab wax soo saarka sida MOV ( QuickTime )
Ka dib markii ay ku daray files mod, waxaad sameyn kartaa qaab wax soo saarka sida "MOV" adigoo gujinaya icon qaab ee interface ka. Halkan waxa kale oo aad sameyn kartaa in aad video encoder, xallinta, heerka jir, iyo sidoo kale audio channel. Haddii aad u doonayaa inaan ciyaaro files ku iPhone, iPad ama iPod, waxaad dooran kartaa presets iyaga si toos ah.
Tallaabo 3: Ka billow si loogu badalo mod in MOV ( QuickTime ) ee Mac OS
Guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta mod in MOV ( QuickTime ) on Mac socda Mac OS X Snow Leopard, Libaaxa, Mountain libaax, iwm kadib waxaad riixi kartaa "Open Folder" si aad u ogaato faylasha la gediyay. Ama waxaad riixi kartaa wax soo saarka liiska hoos-hoos u dhigay meesha aad rabto in lagu badbaadiyo file saarka ka hor qaab beddelidda.
Talooyin: mod ​​in MOV Mac ​​Video Converter (Mountain Libaaxa ka mid ah) sidoo kale waxay bixisaa hawlaha tafatirka video. Haddii aad rabto in aad video shakhsiga, guji "Edit" button. Waxaad ku dari kartaa watermark ama Cinwaan ah, iyo iftiin video ka dhigay, ka duwan, iwm
Sidoo kale, wuxuu kuu diri karaa in tutorial video ah:
Sida loo Helo u Khayr Lugood Movie Heshiisyada iyo Kirada mulkiilayaasha
Sida loo Beddelaan AVCHD in MKV ee Mac / Windows
3 Talaabada si loogu badalo PPT si QuickTime MOV Video
Wmv Converter - Beddelaan Videos dhexeeya wmv oo kale Videos